Khaladaadka San Andrés: waa maxay, astaamaha iyo khataraha | Saadaasha Shabakadda
San Andrés qalad
Qaab dhismeedka juqraafiyeed ee qolofta dhulkeena ee meeraheenna waxay leedahay qaab-dhismeedyo badan. Mid ka mid ah waa guuldarrooyinka. Cillada ugu caansan adduunka waa Khaladka San Andreas. Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo leh mid ka mid ah barakicii ugu xoogga badnaa ee ay ku yeelatay adduunka waana kan inta badan sababa dhulgariir heerkiisu sareeyo.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato qaladka San Andrés, waa maxay qaladka iyo maxay yihiin ciladaha jira.
1 Waa maxay fashilaad
2 Sababta dhulgariirrada
3 Noocyada fashilka
4 San Andrés qalad
5 Isbeddellada qaladka San Andrés
6 Khatarta khaladka San Andreas
Waa maxay fashilaad
Ciladaha cilmiga dhulka ayaa ah dildilaacyo ama aagagga dillaaca oo u dhexeeya laba dhagax oo ka mid ah dhulka dushiisa. Waa kala go 'ay samaysay dillaacii laba dhagax oo waawayn sababtuna tahay awoodda tectonic -ka oo dhaaftay iska caabbintooda. Tani waxay keenaysaa kala-bax u dhexeeya midba midka kale. Guuldarrooyinku waxay u dhici karaan si degdeg ah ama si tartiib ah, sidoo kale waxay noqon karaan dhowr milimitir ama kumanaan kiilomitir.Tusaale ahaan, qaladka San Andreas waxaa loo tixgeliyaa cilladda ugu halista badan adduunka.
Kahor intaan wax dhismo ah ka dhicin dhul aan horumarin, cilmi-baarayaasha cilmiga dhulka waa inay falanqeeyaan carrada si ay u ogaadaan inay ku habboon tahay dhisme iyo in kale. Khaladaadka qaar si cad ayaa loo arkaa, laakiin waqti ka dib, cilladaha kale waxay noqon karaan kuwo aan caddeyn. In kasta oo aan dhammaantood lagu tilmaamin inay yihiin kuwo qatar ah, dhaqdhaqaaqa dhulkan "nabar" waa mid aan la saadaalin karin.
Awoodaha dabiiciga ah ee laga soosaaray qolofta dhulka waxay keenaan dhaq-dhaqaaqa dhagxaanta dhagxaanta ama meelaha ballaaran ee taarikada tectonic. Cidhifyada iyo halabuurka taarikadaas waxaa ka buuxa kuuskuus, qalloocnaan iyo sinnaan la'aan, taasoo hoos u dhigeysa xawaaraha dhaqdhaqaaqa isla markaana uruurinaya tamar.
Tamartaan ku urursan meel cayiman waa in la siidaayaa, markaa si lama filaan ah ayey u jabaysaa oo u boodaysaa culeys iyo culeys awgeed. Ugu dambeyn, habeynta taargooyinka waxaa matalaya hirarka seismic oo soo saara gariir.
Dhammaan waxqabadyadan mar walba dunida dibaddu uma aragto qaab dhulgariir xoog leh, haddii aan dhaq -dhaqaaqu aad u dheerayn oo xayndaabku uu simbiriirixdo dhawr mitir.
Waxaa jira seddex nooc oo guuldarooyin ah adduunka. Aan aragno waxay yihiin:
Dhankeeda Waxay sidoo kale yihiin cilado isdabajoog ah oo toosan, farqiga ayaa ah in saqafka saqafku uu kor u socdo marka loo eego qaybta kale. Awoodda ay ka dhasheen cilladaha noocan ahi way badan yihiin, taas oo macnaheedu yahay in labada baloog midba midka kale u riixo, samaysana jeex jeexan.
Normal: Waa siibasho marka la quusiyo halka hal baloog uu ka hooseeyo marka loo eego kan kale. Taasi waa, waa dhaqdhaqaaq toosan. Waxay asal ahaan ka timaaddaa saxanka cillad farsamo ama kala tag. Khaladaadka noocan ah badanaa waa yar yihiin, oo barakicintoodu waa hal mitir, laakiin waxaa jira waxyaabo ka reeban oo gaaraya tobanaan kilomitir.
Horizontal ama scrolling: Sida magaca ka muuqata, dhaqdhaqaaqu waa mid jiif ah, oo barbar socda jihada cilladda. Waxay u dhaqaaqi kartaa dhanka midig, loona yaqaan wareegga midig, ama waxay u dhaqaaqi kartaa dhanka bidix, oo loo yaqaan 'synastral'.
Khaladaadka ugu badan ee la baray ee la yaqaan ee jiifka ama barakicinta waa cilladda San Andrés, oo soo saartay dhulgariirro sababo la xiriira u dhaqaaqista dhinaca midig ama gunta.
18 -kii Abriil, 1906, dunidu waxay si buuxda u siisay qaladka San Andreas. Barakaca cilladda ayaa sababay dhulgariir xoog leh oo ka dhacay San Francisco, Mareykanka, iyagoo dilay in ka badan 3.000 oo qof.
Khasaaraha 'San Andreas Fault' waa cillaac weyn oo qalloocan oo ku jira qolofta dhulka, qiyaastii 1.300 oo kilomitir oo dherer ah, oo ka bilaabmaya cirifka woqooyi ee Gacanka Kaalifoorniya oo sii maraya galbeedka California ee Mareykanka. Dhaqdhaqaaqa tectonic ee uu duubay qaladkan 15-20 milyan sano jir ah ayaa soo jiitay indhaha dadweynaha sababo la xiriira xoojinta dhulgariirka. Maalintaas kadib 1906, 1989 iyo 1994, fashilka ayaa si cad u tilmaamay inay sii shaqayn doonto.
San Andrés kaliya ma ahan wax qalad ah. Waxay u taagan tahay laba taarikood oo waaweyn oo qolofta dhulka ah: saxanka Baasifiga iyo saxanka Waqooyiga Ameerika. Si ka duwan Mareykanka, saxanka Baasifigga wuxuu u rogmadaa dhinac. Sidaa darteed, waxaa lagu tilmaamaa inay tahay siibid ama guuldaro barakac.
Isbeddellada qaladka San Andrés
Ciladdu waxay soo martay dhowr isbeddel intii ay jirtay, oo waxay dhaqaaqaysaa oo keliya dhowr sentimitir sanadkii, waxayna qayb ahaan hoos u dhacday 6.4 m dhulgariirkii 1906. Qaar ka mid ah saynisyahannada ku hawlan cilmi-baaristooda waxay xitaa heleen dhaqdhaqaaq toosan.
Daraasadaha kale ee hadda jira, khaladka San Andreas ee u dhow Parkfield, California ayaa la ogaaday inuu lahaa dhulgariir qiyaastii 6 digrii 22kii sanaba mar. Culimada cilmiga dhul gariirku waxay sii saadaaliyeen inay dhici doonto hal mar sanadkii 1993, laakiin ma dhicin ilaa 2004. Cilmi ahaan marka laga hadlayo, tani waa tiro aad isugu dhow, sidaa darteed aaggan Kaalifoorniya wuxuu u adeegay cilmi baaris muhiim ah oo ku saabsan dhulgariirka iyo dhaqankooda.
Khatarta khaladka San Andreas
Cilladda San Andrés waa qayb ka mid ah Giraanta Baasifigga ee Baasifigga, taas oo daboosha in ka badan 40.000 kilomitir oo aagag leh dhulgariirro isdaba joog ah iyo dhaqdhaqaaq foolkaanno ah. Aagga dabka ama giraanta dabku wuxuu ka socdaa New Zealand illaa Koonfurta Ameerika, oo xuduud la leh Japan xagga woqooyi, Oletian Trench, iyo Waqooyiga iyo Bartamaha Ameerika.
Aad ugu dhow aagga qaladka San Andreas waa California, iyo waliba bulshooyin yar yar oo celcelis ahaan tiradoodu tahay 38 milyan. Khubaradu waxay ka digayaan in dhulgariirrada ay kiciyaan dhaqdhaqaaqa tectonic ee taarikada cilladdu ay noqon doonaan kuwo waxyeello geysta. Si kastaba ha noqotee, dadku waa inay u diyaargaroobaan gariir suurta gal ah oo fudud iyo mid soo noqnoqda. Sidoo kale, dhismayaasha ugu casrisan, buundooyinka iyo waddooyinka ayaa loo dhisayaa si looga hor tago dhulgariirka loona nuugo mowjadaha dhul gariirka. Waa wax aan macquul aheyn in si dhab ah loo saadaaliyo dhulgariirka, laakiin xaqiiqdu waxay tahay in San Andrés uu weli nool yahay.
Khatarta ay aad ugu welwelsan yihiin khubarada cilmiga dhulka ayaa ka timid dhinaca koonfureed. Baadhitaanka ciidda wuxuu muujinayaa in woqooyiga la burburiyey sanadkii 1906-tii, qaybta dhexena la baabi'iyay 160 sano ka hor, laakiin koofurta ayaa cid walba ilaalisay.
Waxaa jira dhulgariir ka dhaca koonfurta fog qiyaastii 150kii sanoba mar, laakiin ku dhowaad 300 sano ayaa ka soo wareegtay iyada oo aan la hayn wax diiwaan ah oo dhaqdhaqaaq ah. Sidaa darteed, marka dibedda loogu soo daayo, uruurinta tamarta hoosteeda waxay noqon kartaa mid ba'an. Haddii ay dhacdo dhulgariir weyn oo cabbirkiisu yahay Richter oo ka weyn 7 digrii, dadka Los Angeles aad bay u saamayn doontaa, iyada oo ugu yaraan 2,000 oo qof ay halis ugu jiraan dhimasho.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto cilladda San Andrés iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » San Andrés qalad
Waa maxay anemometer